क्यान्डी नाश स्तर 419 धोखा दिन्छ र सल्लाह - क्यान्डी क्रश खेल - नि: शुल्क Lives सुझावहरू धोखा दिन्छ
तिमि यहाँ छौ: घर / क्यान्डी क्रश धोखा / क्यान्डी नाश स्तर 419 धोखा दिन्छ र सल्लाह
Last updated on अगस्त 4, 2021 द्वारा Isobella फ्रान्क्स LeaveaComment
के तपाई सागर कत्तिको गहिराइमा चकित हुनुहुन्छ?? हाम्रो आकाशगंगा कती ठूलो छ? ब्रह्माण्ड कति विशाल छ? कसरी क्यान्डी क्रश सागाको स्तरहरू हुनेछन्? मेरो मतलब, यो त्यस्तो छैन जस्तो कि हामीले उनीहरू सबैलाई पास गरिसकेका छौं; वास्तबमा, हामी मध्ये धेरै हालको अध्याय भन्दा पछाडि छौं. प्लस साइडमा, अगाडि हेर्न को लागी धेरै कुरा छन्. जो अझै पनी पहिलेका स्तरहरुमा अडिग छन्, हामी क्यान्डी क्रश स्तर ल्याउँछौं 419 धोखा दिन्छ र सल्लाह.
कहिलेकाँही खेलहरू खेल्दा, हामी एक स्तर सामना गर्छौं जुन हामीलाई दिन बित्न जान्छ. तर त्यो कडा परिश्रम पछि केहि कमाउन लड्न को खुशी छ; हामीलाई शक्तिशाली र मीठो महसुस गराउँछ. केन्डी क्रश सागाको साथ यस्तो अवस्था छ जहाँ केही स्तरहरूले खेलाडीहरूलाई निराश बनाउँदछन्. राम्रो, वास्तवमा होइन, तर यसले मानिसहरूलाई असाध्यै रिसाउँछ र रिस उठाउँछ. तिनीहरूको आनन्द कल्पना गर्नुहोस् जब तिनीहरू ती स्तरहरू पार गर्छन् ... कल्पना गर्नुहोस्.
क्यान्डी क्रश स्तरको उद्देश्य 419 अलि लामो छ. तपाईंले स .्कलन गर्नुपर्नेछ 100 पहेंलो क्यान्डीहरू,6लपेटिएको क्यान्डीहरू, र2रंग बम. त्योसँगै, खेलाडीहरूले पनि स्कोर गर्नु पर्छ 18.000 पोइन्टहरू. यहाँ समातिएको छ, केन्द्रको अधिकतर क्यान्डी रैपरले ओगटेको छ. केवल तपाईंले तिनीहरूलाई खाली गरे पछि तपाईंसँग खेल्नको लागि उचित मैदान छ.
क्यान्डी नाश स्तर 419 धोखा दिन्छ र सल्लाह:
हामीले सुनेका कुराबाट, धेरै खेलाडीहरूले अन्तमा दिनहरू यो स्तर समाप्त गर्नमा बिताए तर त्यसो गर्न असफल भए. त्यहाँ एक बान्की छ जुन हामीले मैदान भर खेलाडीहरू द्वारा दोहोरिएको देख्यौं, र त्यो उनीहरूको गेमप्ले व्यवस्थित गर्दैनन्. तर यदि तपाइँ दिइएको सल्लाह अनुसार खेल, हामी पक्का छौं तपाईले पहिलो प्रयासमा स्तर खाली गर्नु हुनेछ.
तपाईंको पहिलो उद्देश्य अवरोधहरू खाली गर्नुपर्दछ (क्यान्डी प्याकेजि।) चीजहरू तपाईंको लागि सरल र सजिलो बनाउनको लागि. पर्याप्त ठाउँको साथ, तपाईले धेरै विशेष क्यान्डीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ जति तपाईं चाहानुहुन्छ र स्तर सजिलै खाली गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं उद्देश्यहरू पछि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं केन्द्रबाट रैपरहरू खाली गर्दै हुनुहुन्छ.
जब अवरोधहरू खाली गर्दै, तपाईले बमहरू भेट गर्न सक्नुहुनेछ केही बर्ष मात्र 'मूल्यको बाँकी, त्यसोभए निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरूलाई पहिले पप गर्नुहोस्.
यदि तपाईं ध्यान दिनुहोस्, केन्डी र्यापर्सको बीचमा तपाईंको प्रतीक्षा गर्दै त्यहाँ छ. क्यान्डी तश्तरीले तपाईंलाई तीन वटा बेर्ने क्यान्डीहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईं एक पछि सास पोप गरिसके पछि सँगै जान्छ।. तर त्यसका लागि, तपाईंले पहिले यो पुग्नुपर्नेछ.
धेरै स्तरहरूमा जस्तै, विशेष क्यान्डी बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उत्तम हुन्छ, त्यसैले अन्धाधुन्ध सुझावहरू अनुसरण नगर्नुहोस् र कुनै सम्भावित संयोजनको लागि आफ्नो आँखा खुला राख्नुहोस्.
हामी बुझ्छौं कि यो सबैको लागि सम्भव नहुन सक्छ, तर यो ती स्तरहरू मध्ये एक हो जहाँ तपाईं ठूला बन्दुकहरू बाहिर निकाल्नुहुन्छ. त्यसोभए यदि तपाईंसँग कुनै सम्भावित बोनस छन् (विशेष क्यान्डीहरू) तिमीले प्रयोग गर्न सक्छौ, आफैलाई हात गर्न निश्चित गर्नुहोस्.
त्यो यसको बारेमा हो, अर्को मान्छे भेटौला. तब सम्म, मीठो रह.